Rikoooo.com - Ny planina dia tsy mankamin'ny hantsana mideza.
Tsy mbola misy lahatsoratra
Board index Terminal fiaramanidina fiaramanidina Flight Simulator X (FSX) + Fanontana Steam & Prepar3D hatramin'ny v3
Ny fiaramanidina dia tsy mitazam-potsiny ny hantsana mihodina.
Misy an'arivony add-ons ao amin'ny Web ho an'ny mahazatra FSX ary Prepar3D v1 ka hatramin'ny v3. Mitsangàna, na aiza na aiza misy eran'izao tontolo izao, manidina ny sasany amin'ireo fiaramanidina malaza indrindra manerantany mankany amin'ny toerana iray amin'ny 24,000.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 6 • Pejy 1 of 1
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by geniousabhishe1 » 22 Mar 2017, 12:53
Raha ny marina dia nakariko ny fonosana livery 737 164 sy ny fonosana B787 ary rehefa manidina aho dia hitako fa tsy mahatratra ny tampon'ny hantsana. Tonga dia milahatra miaraka amin'ny lalantsara izy io fa tsy mahatratra ny tampon'ny hantsana.
Joined: 21 Jolay 2015, 09:45
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 22 Mar 2017, 19:05
Salama maraina (ok hariva ara-teknika tsara eto Texas).
Matetika aho manidina ny B747-400LCF matetika, ary nahatsikaritra izany koa tamin'ny ankamaroan'ny fiaramanidiko. Tsy azoko antoka hoe nahoana izany, raha ny marina. Izaho dia somary mahay tsara amin'ny "manidina ny baolina" amin'ny tanana, fa raha ny marina ... Tsy hatoky solosaina hanao izany ho ahy aho lol fantatro fa hanao an'io ny QW757, saingy mampatahotra ahy marina izany lol
Simulator be mpampiasa indrindra: FSX
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Tonny0909 » 29 Mar 2017, 10:33
Hamarino tsara fa rehefa apetrakao ny "Approach" dia ho foana ny "ALT HLD"
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 29 Mar 2017, 14:04
Aa ... fantatro izao hoe maninona aho no nanana olana tamin'ny Project Airbus A380. Misaotra betsaka fa nanampy indray ianao Tonny0909!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by geniousabhishe1 » 02 Apr 2017, 14:00
Misaotra ny soso-kevitrao fa ny olako nanjavona rehefa nitazona sp2 tao amin'ny rafitro aho.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by WilliamB » 02 Apr 2017, 15:33
Izaho dia nanana an'io olana io taloha ary ny fomba tsara indrindra hiatrehana izany dia ny fametrahana eo amin'ilay localiser aloha sy amin'ny haavony mitovy na amin'ny halavirana mitovy amin'ny runway fa ambany amin'ny haavony. Ary koa ny mety hanampy dia raha vantany vao miorina amin'ny tsindry ILS tsindrio Hold. andramo ireo ary raha tsy manao ny fikafika mijery amin'ny youtube na amin'ny toeran-kafa izy ireo. Ny ankamaroan'ny localisers dia manodidina ny 2000-2500ft no toerana mety indrindra. Omeo izy rehetra lasa izay.
Display: Lahatsoratra rehetra1 andro7 andro2 herinandro1 volana3 volana6 volana1 taona Sort by: AuthorPost fotoanaSubject Direction: niakatramidina
Lahatsoratra 6 • Pejy 1 of 1
Miverina amin'ny "Flight Simulator X (FSX) + Fanontana Steam & Prepar3D hatramin'ny v3 ”
↳ ▃▅▆▇ Zava-dehibe - Règles du Forum - Charte d'utilisation ▇▆▅▃
↳ FSX, Fanontana Steam & Prepar3D jusqu'à v3
↳ Cours de Pilotage - Fanampiana amin'ny Navigation
↳ Avions Procédures
Ours ✖ Concours Terminés
↳ Sary réelles
↳ Vos vols en sary
Momba ny Rikoooo Terminal
. Soso-kevitra boaty
↳ Tongasoa mpikambana vaovao
Terminal fiaramanidina fiaramanidina
↳ Prepar3D v4 sy v5 (64 bits)
↳ Flight Simulator X (FSX) + Fanontana Steam & Prepar3D hatramin'ny v3
Terminal amin'ny Hangar Talk
↳ Dinika ankapobeny
↳ Manidina Tunes
↳ Inona ary taiza no nanidinanao androany
↳ Fiaramanidina tena izy
Ny Terminal Media anao
Amin'ny fotoana rehetra dia UTC + 01: 00
Powered by phpBB® Rindrambaiko forum © phpBB Limited